आधुनिक विद्यालयमा एकजनाको लक्षण
कला र मनोरञ्जन, साहित्य
साहित्य पहिले स्कूलमा सिकाइन्छ। अन्य विषयहरूमा कार्यक्रमहरू परिवर्तन गरिएका छन्, नयाँ पाठपुस्तिकाहरू पनि गणितका लागि लेखिएका छन्, र साहित्यको रूपमा मात्र यस्तो विषयको रूपमा अध्ययन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको नोटबुक्समा, Onegin का वर्णन अझै पनि लेखिएको छ, Famusov र Chatsky बारेमा तर्क। के हामीलाई विद्यालयमा साहित्य पाठ्यक्रमको कार्डिनल सुधार चाहिन्छ वा?
यस खातामा, दुई विचारहरू छन्। एकै ओर, यो कार्यक्रम पहिले नै काम गरिरहेको छ। यो सरल र सजिलै संग साहित्यिक कामहरू पढ्न सुरु हुन्छ , कविता न्यूनतममा असर परेको छ, निकास राम्रो तरिकाले विकसित भएको छ। रूसी लेखकहरूको कामले विदेशी साहित्यलाई प्रभाव पार्छ। विद्यार्थीको नोटबुकमा एकजनाको खराब विशेषता के हो?
यो उनको उदाहरणमा छ कि तपाईं कसरी देख्न सक्नुहुन्छ कि एक व्यक्तिले कसरी जीवित पार्छ जुन व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रीय जडबाट अलग रहन्छ! फ्रान्सेली द्वारा फोस्टेड, सुपरफर्मिक रूप देखि पढाई (सबै को यस्तो एक सतत शिक्षा हुनेछ), एक अहंकार, सामान्य मा, एक ब्रह्माण्डीय, शान्ति को एक आदमी - यो एक शुरुवात को एक संक्षिप्त विवरण हो। र यदि बच्चाले यो बुझ्नुहुन्छ भने, केहि पनि उसलाई पढ्न र जारी गर्नबाट रोक्न, विदेशी क्लासिक्समा स्विच गर्दछन्।
अर्कोतर्फ, आधुनिक साहित्य साँच्चै कार्यक्रममा खराब छ। 20 औं शताब्दीमा लिखित काम गर्दछ, पढ्नका लागि केवल पढाइका बच्चाहरूको पाठपुस्तिकाहरूमा प्रकाशित, तर बढी गम्भीर किताबहरू मध्य र हाई स्कूल पढ्नको लागि लगभग प्रस्तावित छैनन्। किशोरों को बीच साहित्य मा रुचि धेरै राम्रो छैन, र यहाँ सेलेन्डर को काम को बजाय Onegin को एक अनिवार्य विशेषता हो।
वास्तवमा, यदि तपाईंले यो दृष्टिकोण हेर्नुभयो भने, साहित्यहरूमा कार्यक्रमहरू तुरुन्तै सुधार गर्न सकिन्छ, र सबै चीज: ग्यारहवर्षसम्म पाँचौं कक्षाबाट। अन्यथा, विषयमा रूचि पूर्ण रूपमा सुत्नेछ। बच्चाहरूलाई कम्तिमा केहि पढ्न दिनुहोस्, त्यसपछि सबै केहि पढ्न नदिनुहोस्।
स्कूलको विद्यार्थीहरू सामान्यतया तीन असमान समूहहरूमा विभाजित छन्:
बच्चाहरु पढ्ने तिनीहरूको अल्पसंख्यक, तर त्यस्ता छन् र सधैँ हुनेछ। तिनीहरू Onegin को विशेषता, द्वारा टोल्स्टोय र चेखोभका तर्कहरूबाट डराउँदैनन्, तिनीहरूले पहिले नै यो पढेका छन् र वयस्कों संग चर्चा गरे।
साना केटाहरू पढ्ने छोराछोरीहरू अत्यन्तै खुसीसाथ होइन तर यस प्रक्रियाको उत्तेजनाले उनीहरूको उमेरमा पर्याप्त पुस्तकहरू पढ्न सुरु गर्न तयार छन्।
र अन्तमा, ती पढ्नेहरू पढ्ने र कहिल्यै पढ्ने छैनन्। तिनीहरूका लागि साहित्यिक कार्यहरु पढ्ने शिक्षण पाठ्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्न चाहन्छन्। दुर्भाग्यवश, यस्ता बच्चाहरू शाब्दिक तीन चौथाई वर्ग हुन्।
यसकारण, यो स्पष्ट छ कि कार्यक्रममा परिवर्तनहरू साहित्यमा धेरै सीमित प्रतिस्पर्धा आकर्षित हुनेछ। तर यदि तपाईं साहित्य विषय परिवर्तन गर्नुहुन्छ एक विशेष राष्ट्रिय स्वाद, कार्यक्रमको दिशा गुमायो। नैतिक सिद्धान्तहरूको स्थानान्तरण कसरी हुनेछ, यदि साहित्यिक कार्यहरु मार्फत न हो? बच्चाले के सिक्न सम्भव छ कि, कसरी स्वीकार्य छ, राम्रो के हो र के हो खराब छ, कसरी साहित्यिक कार्यहरु मार्फत छैन। आखिर, सबै परिवारले नियमित रूपमा यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउँदैनन्। र यस मुद्दामा एकजनाको विशेषता, बाटोबाट, पहिलो आउछ। बस नाताशा रोस्तोवाको बारेमा सोच्दै र टर्गेनभको कामहरू बुझ्न मन पराउँछु । बीचमा, शैक्षिक समुदायमा बहस रोक्दैन, विद्यार्थी नोटबुक्समा फेरि फेरि देखा पर्दछ: "विशेषता: यूजीन वन।"
"मास्टर र मार्गरेटता" को लुकेको अर्थ
Korolenko, "ब्लाइन्ड म्यूजिकियन": सारांश र कामको नायक
लेखक युरी ओलेहा: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्यहरू
NV Gogol द्वारा "Nevsky Prospekt" द्वारा उपन्यास मा Piskarev र Pirogov को तुलनात्मक विशेषताहरु
शिमोन सैमसनको नोटहरूको समीक्षा र सारांश
मोहरा घर प्रकाश: सुविधाहरू, प्रविधि र सिफारिसहरू
वन क्लब2* (पिट्सजुआमा, अब्खाज़िया): पर्यटकहरूको वर्णन, फोटोहरू र समीक्षाहरू
कोमल चिकन संग सलाद: दुई स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
यो लोकप्रिय कठपुतली
एक फर्न कसरी खाना पकाउनु?
को षड्यन्त्र के हो? यो अनन्त रहस्य एउटा जरूरी छ
एक धेरै महत्त्वपूर्ण घटना - आफ्नो नाति को जन्म भएकोमा बधाई
वकील मा एसएमएस-बधाई
Mound शहर: जनसंख्या, जातीय संरचना, शहर को क्षेत्र
को फूलगुच्छा कसरी चयन गर्ने?
HF-3: पुस्तिका। को केभी-3, ट्यांक को विश्व मा हाइड